रवि लामिछानेको ग्यालेक्सी टिभीमा प्रयोग गरिने फोरके प्रविधि के हो ? थाहा पाउनुहोस् ! – Nepal Online Khabar
काठमाडौ : सञ्चारकर्मी रवि लामिछा’नेले मंगलबार ‘ग्यालेक्सी फोरके’ नामको नयाँ टेलिभिजन सार्व’जनिक गरेका छन् । अधि’कांश च्यानल एचडी प्रविधिमा समेत अद्यावधिक हुन नसकि’रहेको अवस्थामा लामि’छानेले च्यानलको नाममै फोरके राखेका छन् ।
साथै उनले आफ्नो नयाँ च्या’नल देशकै पहिलो फोरके च्यान’ल भएको पनि दाबी गरेका छन् । लामिछानेले दाबी गरेको जस्तै देशको पहिलो फोरके टेलिभ’जन च्यान’ल हेर्दाको अनु’भव संगाल्न धेरै दर्शक आतुर हुन सक्छन् । तर फोरकेको आनन्द उठाउनुअघि आज हामी तपाईं’लाई फोरके प्रविधिबारे बताउने छौं ।
वास्तवमा फोरके कुनै नयाँ प्रवि’धि होइन । यो एउटा रेजाेलुसन स्ट्याण्ड’र्ड हो । यस्तो किसिमको प्रविधिमा भिडियो, डिस्प्ले तथा प्रोजेक्टर बजा’रमा आएको धेरै भइ’सक्यो ।
युट्यु’बले नै २०१० देखि फोरके भिडि’यो अप’लोडको अनुमति दिन सुरु गरेको हो । त्यसअघि सोनीले करिब २०१२ तिर पहिलो फोर के प्रोजेक्टर ल्याएको थियो । आज’भन्दा करिब १८ वर्ष’अघि पहिलो फोर के क्यामेरा पनि सा’र्वजनिक भइसकेको छ ।
अहिले त यो सा’मान्य र सर्वसुलभ प्र’विधि बनिसकेको छ । यो सामान्य व्यक्तिका लागि सजिलै उपलब्ध छ । सबै किसिम’का उपकरणमा यसको प्रयोग हुन थालि’सकेको छ । यो एउटा रेजाे’लुसन प्रविधि हो, जसलाई रेकर्डि’ङ र स्ट्रिमिङ दुवैमा प्रयोग गर्न स’किन्छ ।
रेजाेलुस’नको कुरा गर्दा केही कुरा थाहा पाउँदा स’रल रूपले बुझिन्छ । डिस्प्लेमा साना साना युनिट हुन्छन्, जसलाई पिक्सेल भनिन्छ । फोरकेमा ३ हजार ८४० फिक्सल होरिजेन्ट’ल्ली हुन्छन्, भने भर्टिकल्ली २ हजार १६० पिक्सल हुन्छ । होरिजो’न्टल्ली यसमा करिब ४ हजार पिक्सल हुने भएकोले यसलाई फोरके भनिन्छ ।
फुल एचडी र फोरकेमा फ’रक
फुल एचडीमा रेजाेलु’सन १९२० र १०८० हुन्छ । जब यसको उचाई र चौडाई दुवैमा पिक्से’ललाई दुई गुणा बढाइन्छ तब यसमा फोर’के पाइन्छ । एउटा फुल एचडी’को चार गुणा पिक्सेलमा फोरके रेजुलेसन पाउन सकिन्छ । टु केको कुरा गर्दा त्यसमा १२८० र ७८० पिक्स’ल हुन्छ ।
फोरके को स्क्रिन रेजाेलु’सनकाे कुरा गर्दा यसमा कुल ८ मेगापिक्सेल हुन्छ । किनभने यसको चौडा’ई करिब ४ हजार र उचाई करिब दुई हजार पिक्सलको छ । जब तपाईं यी दुवैला’ई गुणा गर्नुहुन्छ, तब तपाईंले यसमा करिब ८० लाख पिक्सेल पाउनुहुन्छ ।
अब फूल एचडीको कुरा गर्दा त्यस’मा करिब २० लाख पिक्सेल हुन्छ । यसको गुणस्तरीयता फुल एचडीभन्दा चार गुणा राम्रो हुन्छ ।
तपाईंसँग फोरके टेलिभिजन छ, तर तपाईसँग फोरके कन्टेन्ट छैन भने त्यसलाई हेर्न मज्जा आउँदैन । यसका लागि तपाईंले आफ्नो मोबा’इलबाट फोरके भि’डियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब वा इन्टरनेटबाट फोरके भिडियो सामग्री डाउनलोड गरेर टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ । फो’रके भिडियो रेकर्ड गर्न तपाईंसँग कम्तिमा १२ मेगापिक्स’लको क्यामेरा हुनुपर्छ ।
रबि लामिछानेले सुरु गरेको यस नयाँ फोरके च्या’नल मार्फत क्राइम पेट्रोल नेपाल, को बन्छ करोडपति, रामायण, सारेगम, लाल मोहर, सिधा कुरा, आविष्कार लगायतका कार्यक्रम प्रशारण हुनेछन् । – टेक पानाबाट
Prevसाढे तीन लाखमै नेपालमा बन्छ यस्तो आकर्षक घर !हेर्नुहोस(भिडियो सहित)
Nextसिङ्गापुर पठाउने भन्दै बढि रकम लिएर दुबई पठाउने म्यान’पावर सञ्चालक पौडेल प’क्राउ